पिल्सको अति प्रयोग गर्ने महिलालाई यस्ता असर देखिन सक्छ ! » Khulla Sanchar
पिल्सको अति प्रयोग गर्ने महिलालाई यस्ता असर देखिन सक्छ !
टाउको दुख्ने तथा माईग्रेनको समस्या !
लठ्याउन सक्छ !
स्तन सुन्निनु वा कडापन आउनु !
महिनावारीका बेला असामान्य किसिमले रगत जाने !
तौल बढ्छ !
योनीमा इन्फेक्सन !
मुडमा परिवर्तन !
पिल्सको असर शरीरिक रुपमा मात्रै होइन कहिले काही मानसिक रुपमा पनि देखिन्छ ।
कहिलेकाँही डिप्रेसनको बाटोमा समेत लैजानसक्छ । किनकी सिन्थेटिक हार्मोनले मस्तिस्कको नसामा असर गर्छ । यदि तपाँईको घरमा कसैलाई डिप्रेसन छ भने अरुलाई पनि हुनसक्छ । त्यसैले डाक्टरलाई सबै कुरा भन्नुपर्छ ।
त्यो महिला जसले सुरु देखिनै चस्मा लगाउछिन् , उनले गर्भनिरोधक चक्की पिल्स खाँदा आँखामा असर पर्न सक्छ । हर्मोृनको कारणले आँखाको डील सुनिन्छ सक्छ । जसले समस्या हुन्छ ।आँखाको ज्योतिमा परिवर्तन !
यौन इच्छामा कमी !